Puntlad oo ardayda dugsiyada sare ugu baaqday in ay Jaamacadaha dalka wax ku bartaan (Dhegeyso) – Radio Daljir
Puntlad oo ardayda dugsiyada sare ugu baaqday in ay Jaamacadaha dalka wax ku bartaan (Dhegeyso)
Agoosto 14, 2013 5:22 b 0
Garoowe, August 14, 2013 – Wasaarada waxbarashada ee Puntland iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay ardayda sanadkan dhamaysay dugsiyada sare in ay dalka gudihiisa wax ku bartaan, taasi oo lagu tilmaamay in ay tahay mid ahmiyad gaar ah leh.
Prof. Daahir Mire Jibriil oo Bare ka ah Jaamacad ku taala dalka Maraykanka oo maanta boqolaal arday oo ka mid ah kuwa dhameeyey dugsiyada sare sanadkan, wuxuu ugu baaqay in ay mar kasta niyada siiyaan in ay wax ku bartaan dalkooda.
Sidaasi si la mid ah agaasimaha waaxda Tacliinta sare ee wasaarada waxbarashada ee Puntland Cabdulaahi Jaamac (Dhubad) oo isna kulankaasi ka hadlay wuxuu ku cel-celiyey in ay muhiim tahay in diirada la saaro in wax lagu barto gudaha dalka.
Mudane Dhubad, wuxuu sheegay in ardaydu ay inta badan ku fekeraan in ay wax ku bartaan meelo ka baxsan dalka, kuwaasi oo dhaqaale iyo nolol ahaan aan wanaagsanayn, wuxuu sheegay in aysan waxba ku kala duwanayn adeegyada waxbarasho ee dalalka haatan waxbarashada loo aado iyo jaamacadaha gudaha.
Aqoon-yahanada iyo masuuliyiinta wasaarada waxbarashada ayaa hadalkaan waxay ka jeediyeen kulan dhiiri-gelin ah oo maanta ka dhacay xaruunta Jaamacada PSU, kulankaasi ayaa waxaa lagu gorfeeyey sidii ardaydu ay ugu diyaar garoobi lahaayeen waxbarashada jaamacadaha.
Dhegeyso hadalka Prof. Daahir Mire Jibriil Bare ka ah jaamacad ku taala US, wuxuuna ka hadlay kulanka..
Dugsiga sare Cumar Samatar ee Gaalkacyo oo xalay ku guulaystay koobka dugsiyda sare ee Puntland
42 qof oo ku dhintay fatahaadii Niilka ee Suudaan xili Is-gaarsiinta iyo Korontada ay go?an yihiin